HOME – Page 5 – Voice of Somalis In Exile
Cinwaanka kor ku xusan ma cusba, oo hore ayaan u qoray maqaal uu hordhac u yahay, wuxuuna ku soo baxay maqaalkaasi wargeyskii QARAN PRESS oo Muqdisho lagu daabici jiray waayadii dagaallada sokeeye ay halakeeyeen magalaada iyo dadkeedaba,kaasoo ay ku loolamayeen hogaamiye kooxeedyo kursiga u hamuun qaba. Xilligaas waxaan maqaalkeyga kaga […]
Axad, 12th May, 2019 KABUL (Radio FreeEurope)- Saraakiil reer Afghan ah ayaa sheegaya in Mena Mangal, oo hore u ahayd wariye Taleefishan, lagu toogtay caasimada Afghanistan ee Kabul. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha gudaha, Nasrat Raimi ayaa sheegay in Mena lagu dilay degmada 8-aad ee Kabul, saacadihii hore ee shalayto […]
Sabti, 15 December, 2018 (Mogadishu)- The Special representative of the Chairperson of the African Union Commission for Somalia (SRCC) and Head of AMISOM, Ambassador Francisco Madeira, has been following closely the events in South West State of Somalia that culminated in the arrest of Mr. Mukhtar Robow. Ambassador Madeira wishes […]
Sabti, 15th December, (AminaWehelie)- Amisom ayaa beenisay in ay ciidammo magacooda ku shaqeynaya xireen, mid ka mid ah u-tartamaayaasha madaxtinnimada dolwad-goboleedka Koofur Galbeed ee Soomaaliya, Mukhtaar Rooboow (Abuu-Mansuur). Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna, madaxa howlgallada Amisom ee Soomaaliya, Francisco Caetano Jose Maderia, oo war cad […]
Axad, 2nd December, Afgooye (Amina Wehelie)-Banaanbax ay isugu soo baxeen qaar ka mid ah dadweynaha degan degmada Afgooye, oo 30 Km u jirta Muqdisho ayaa ka dhacay degmadaasi. Banaanbaxa ayaa wararku sheegayaan in ay dhigeen dadweyne ka careysan, qalalaashaha iyo faragelinta ay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ku heyso maamul […]
Arbaco, November, 28th 2018 (AminaWehelie)-Iyadoo uu garabta u saaran yahay si hanweyniyi ku dheehan tahay, calanka Falastiin oo qeyb ka ah dharkeeda shaqada, ayeey Xaakinnad Kholoud Al-Fiqih waxay isbadel ku sameysay taariikhda. Ahaanshaha haweeneydii ugu horeysay ee garsoore ka noqota maxkamadda shareecada ee Falastiin, ayaa waxaa halkaan lagu eegayaa hardanka, […]
Arbaco, November, 28th 2018 (AminaWehelie)-Shariikadda tagaasida ee Uber, ayaa lagu ganaaxay lacag fara badan ka dib markeey u ogolaatay qolayaha dadka ku il-duufa Internetka (Hackers) in ay u soo xadaan xogta ku dhowaad 2.7 milyan oo qof oo ah macaamiisheeda ku noola dhulweynaha United Kingdom. Ganaaxan ayaa la xiriira, mar […]
Saturday, 24th November 2018 (AW)- Sources: Mail Online. A ban on junk food advertising across London‘s public transport system will be introduced on February 25. The capital’s mayor Sadiq Khan has confirmed the ‘tough action’ initiative, which is part of the London Food Strategy to reduce child obesity in the city by 2028. […]